न यता न उता बाबुराम भए अलपत्र ! « Deshko News
न यता न उता बाबुराम भए अलपत्र !
गत असोज १७ गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच बाम एकता हुँदा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए, यो एकता देश र नेपाली जनताको हित मा छ ।
राष्ट्रिय सभा गृहको भवनमा खचाखच भिडलाई सम्बोधन गर्दे भट्टराइको बोलेको बोली एक हप्तापछि फिक्का सावित भयो, जतिबेला उनि गठबन्धनबाट बाहिरिसकेका थिए ।
बाबुराम बाहिरिएपछि अनेक खाले टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । लगत्तै उनि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे । तर अहिले त्यहाँबाट पनि बाहिरिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वाम गठबन्धनमा आफ्नो हैसियत भन्दा बढी सिट मागेपछि लफडा भएको थियो । त्यस्तै यतिबेला कांग्रेससँग पनि बाबुरामले बढी सिटको दाबी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
ठूलो भाग खान खोज्दा यता र उता डुलिरहेका बाबुराम अन्ततः न यता न उता भएर अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बाबुरामको अनेक चरित्रका कारण जनतामा उनको छवि समेत धुमिल बनेको छ ।
बाबुराम कहिले आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर उठ्ने त, कहिले एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर उठ्ने कुरा गर्छन् । त्यतिमात्र हैन कांग्रेसको रुख चिन्ह लिएर उठ्ने भने पनि कांग्रेहरु नै रुष्ट बनेको खबरहरु आउन थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा( बाबुराम भट्टराईलाई दिएमा पार्टीलाई घाटा हुने भन्दै कार्यकर्ताले विरोध गर्न थालेका छन् ।
कांग्रेस पदाधिकारी र कार्यकर्ताले विभिन्न बैठकमा भट्टरार्इलाई जिताउँदा कांग्रेसलाई फाइदा नहुने तर्क गर्न थालेका हुन् ।
‘कांग्रेसलाई जरैदेखि फाल्नुपर्छ भनेर वाम गठबन्धनमा लागेका भट्टराईलाई गठबन्धनले गोरखा २ नदिएपछि उनी कांग्रेससँग तालमेल गर्न आएका हुन्, कांग्रेसका एक नेताले भने, भट्टराईका कार्यकर्ताले अर्को क्षेत्रमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई भोट हालेर जिताउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी के ?
दोस्रो माओवादी केन्द्र , तेस्रो एमाले र चौथोमा नयाँ शक्ति छ । तर, भट्टराईले चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्न लागेको गोरखा २ मा भने नयाँ शक्ति एमाले भन्दा अगाडि छ ।
त्यहाँ कांग्रेससँग मिलेर निर्वाचनमा जाँदा सहजै जित्न सकिने विश्लेषण भट्टराइले गरेका छन् । एमालेको केही मत पाए जित्ने आसमा माओवादी नेता नारायाण्काजी श्रेष्ठ छन् ।
उनले गोरखा २ आफूले छाड्न नसक्ने अड्डी लिएपछि भट्टराई वाम गठबन्धनबाट बाहिरिएर कांग्रेससँग पुगेका थिए। तर भट्टाराई कांग्रेसबाट पनि बाहिरिन सक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।